Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment कहिले पुरा होला धरहरा चढेर काठमाडौं सहर नियाल्ने रहर ? - Pnpkhabar.com
कहिले पुरा होला धरहरा चढेर काठमाडौं सहर नियाल्ने रहर ?
काठमाडौं, १ पुस : धरहरा चढेर काठमाडौं सहर नियाल्ने रहर पूरा गर्न नेपाली नागरिकले अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने भएको छ । बीसौँ तलाको धरहराको सिरानी तलाको अहिले ढलान गर्ने तयारी भइरहेको छ । अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको ५० प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको छ । गोरखा भूकम्पको तीन वर्षपछि मात्रै यस सम्पदाको पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको हो ।
भूकम्पले ढलेको भीमसेनस्तम्भ पुनर्निर्माणको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधिवत् रूपमा २०७५ पुस १२ गते उद्घाटन गरेका हुन् । मुख्तियार भीमसेन थापाले विसं १८८२ मा पत्नी त्रिपुरासुन्दरीको सम्झनामा निर्माण गर्न लगाएको ११ तले धरहरालाई नब्बे सालको भूकम्पले क्षति पारेपछि नौतले बनाइएको थियो ।
दुई वर्षका अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि हिजोआज निर्माणका काममा सुस्तता देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सम्पदाविज्ञ राजुमान मानन्धर सुरुवाती चरणमा तीव्ररूपमा निर्माणको काम भए पनि पछिल्लो समय त्यहीअनुरूप काम अघि बढ्न नसक्दा थप गरिएका समयमा पनि काम सकिन्छ भन्नेमा शङ्का उब्जिएको बताउँछन् ।
कोरोना महामारी र अन्य केही आन्तरिक समस्याका कारण निर्धारित समयमै काम पूरा नहुने भएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आठ महिना समय थप गरिदिएको छ । नेपाली र केही भारतीयसहित दैनिक एक सय ५० कामदार नियमितरूपमा निर्माणमा जुटिरहेका छन् । धरहरा पुनर्निर्माणका प्रोजेक्ट म्यानेजर श्याम श्रेष्ठ आफूहरूले प्राधिकरणसँग थप २१ महिनाको समय माग गरेको तर आठ महिना मात्रै थपिएको बताउँछन् ।
त्यसकारण थप समयभित्र सबै काम सक्न मुस्किलै छ । ‘धरहरा निर्माणको मुख्य काम सकिन्छ तर सौन्दर्य अभिवृद्धि र पार्किङको काम पनि धेरै रहेकाले फेरि समय थप्नुपर्ने हुन सक्छ’, म्यानेजर श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने गरी काम भइरहेको छ । ढुङ्गेधाराबाट निरन्तर पानी खस्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
रमन कन्स्ट्रक्नशले ठेक्का पाएको धरहराको पुनर्निर्माणमा तीन अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताइएको छ । पहिलाको धरहराभन्दा नयाँ बन्ने धरहरा थप चौडा हुनेछ । यहाँ दुई लिफ्ट रहने छन् । साथै एउटा परम्परागत भर्‍याङ पनि हुनेछ । आगन्तुकले दुईमध्ये एक रोजेर प्रयोग गर्न सक्छन् । बयालीस रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने धरहरा परिसरमा बगैँचा, सङ्ग्रहालय, रङ्गीन जलफोहरा, प्रदर्शनी कक्ष, पुस्तकालय, पार्किङस्थल, रेस्टुरेन्ट र व्यापारिक पसलसमेत हुनेछन् ।
बाहिरबाट ११ तलाको देखिने भए पनि स्तम्भ २२ तलाको हुनेछ । यसको उचाइ ७२ मिटर तथा १४ दशमलव ६३ मिटरको आधार रहने छ । पहिले गोश्वारा हुलाक भएको ठाउँमा उद्यान बन्ने छ । उद्यानभित्र बस्ने ठाउँ, ढुङ्गेधारा, हरियाली चौर र चमेना गृह हुनेछ । यहाँ पढ्न, ध्यान गर्न या आरामसँग बस्न चाहने सबैका लागि सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
यहाँ तीन सय ५० गाडी र ६ हजार मोटरसाइकल पार्किङ गर्न मिल्ने बताइएको छ । धरहराको १८ औँ तलामा अवलोकन कक्षसहित सङ्ग्रहालय, फोहरा, बगैंँचा र खाजाघर पनि रहने छन् । पचास वर्ष अघिदेखि हुलाक सेवा दिँदै आएको यहाँको गोस्वारा हुलाक कार्यालयलाई अहिले बबरमहलको आपूर्ति व्यवस्था विभागकै प्राङ्गणमा सारिएको छ ।
गोस्वारा हुलाकको भवन भएका ठाउँमा तीनतले भूमिगत पार्किङ स्थल बन्ने छ । यहाँ रहेको टक्सार विभाग पनि बबलमहलमा स्थानान्तरण भएको छ । टक्सार विभाग रहँदा सुरक्षाका कारण बन्द गरिएको पुरानो बाटोलार्ई स्थानीय नागरिकको मागअनुसार केही समय अघिदेखि खोलिएको छ ।